Ogaden News Agency (ONA) – Dhibka lagu hayo dadka reer-guuraaga ah ee culumada tijaarada ku haysta Nairoobi ay dhagaha ka fureysteen
Dhibka lagu hayo dadka reer-guuraaga ah ee culumada tijaarada ku haysta Nairoobi ay dhagaha ka fureysteen
Posted by ONA Admin	/ February 24, 2013
Waxaa dhambaalkan noo soo diray niman odayaal ah oo isugu jira xoola dhaqato iyo oday beeleedyo ku dhaqan gobolada Ogadenya oo ka cabanaya dhibaatada ay ku hayaan ciidamada Itobiya iyo maxaysatada la socota. Dhambaalkan ayay odayaasha soo diray ugu baaqayaan culumada joogta Nairobi ee u nasab sheegta inay ka hadlaan dhibkan lagu hayo, ama ay joojiyaan socdaalada been abuurka ahee ay kolba ku imanayaan Jigjiga oy ugu tagayaan dhiigyacab shacabka Somalida Ogadenya Cabdi Iley.
Waxay ku bilaabeen dhambaalka xogwarankan;
Dhaqaalo xumo aad u daran oo soo wajahday Askarta gumaysiga Ethiopai kadib markay ka go’day sahaydii la siinjiray, ayaa si loogu helo Askarta gumaysiga Ethiopia dhaqaalo iyo waxay ku noolaadaan, waxay bilaabeen in dadka shacabka ah lagu soo rogo Canshuur (Gibir) taasi oo laga qaadayo Dadka, Goobaha ganacsiga iyo Duunyada ay dhaqdaan.
Shacabka Ogaadeeniya oo mudo sanado ah ay saarnayd cunaqabatayn xaga ganacsiga ah ayaa waxay xukuumada gumaysiga Ethiopia bilowday inay si qasab ah kaga uruuriso dadka shacabka ah lacago si loogu helo dhaqaale askarteeda nafaysan ee jooga Ogaadeeniya.
Canshuurtaan oo lagu soo rogay dhammaan Gobolada Ogaadeeniya ayaa waxaa ugu sii daran Gobolada Doollo iyo Jarar oo dadka shacabka ah si bahalnimo ah ay u boobayaan hantidooda askarta gumaysiga Ethiopia
Xukuumada gumaysiga Ethiopia ayaa waxay amar kusiisay Askarteeda jooga Ogaadeeniya inay ka qaadaan Dadka shacabka ah,Goobaha ganacsiga iyo Xoolaha ay dhaqadaan Canshuur dhan
Dadka ruuxiiba 100 bir Bil kasta
Goobaha ganacsiga 1,000 Bir
Neefka Geela ah 100 bir
Lo’da 50 bir iyo Adhiga oo laga qaadayo 20 bir,
Boobka iyo biliiqaysiga hantida dadka shacabka ah waxaa dheer iyadoo todobaadkan ay Askarta gumaysiga Ethioipa in kabadan 150 ceel ka aaseen deegaanka Ceela-obo iyo deegaanada hoosyimaada.
Waxaan ka codsanaynaa dhamaan culumada Somaaliyeed, gaar ahaan kuwa u nasab sheegta waddan Ogadenya ee jooga Nairobi ama dunida dacaladeeda, siduu kale indheergaradka umadda, inay arintaa ka hadlaan oy gaadhsiiyaan dunida si wax looga qabto.